9600 ကျပ်ထဲနဲ့ [10000Mah] powerBankကိုတပ်ဆင်ခြင်း how to makeapower bank at home very easy - پاوربانک
9600 ကျပ်ထဲနဲ့ [10000Mah] powerBankကိုတပ်ဆင်ခြင်း how to makeapower bank at home very easy
please Like & Subscriber
အိမ်တွင်း ဝါယာရိန်း အခြခံများ
စတဲ့ လျှပ်စစ်အကြောင်းရာများကို တင်ဆက်ပေးသွား မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် ⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️
ကျနော့ရဲ့ EC Myanmar Channel ကို
Subscribe လုပ်ပေးထားပါဦး 🙏🙏🙏🙏
Myanmar Electronic. Extension Box Repairing
Electronic Basic Electronic. Myanmar Electrical Myanmar
Electronic Myanmar YouTube Channel . Myanmar basic Electronic .
Electronic basic .Electrical Myanmar YouTube Channel
Myanmar Electrical. Electrical Myanmar
Wireless Power Bank !!
EC Tech Myanmar
kyar ni گفت:
22 خرداد 1401 در 1:32 ق.ظ
phyomin zaw گفت:
အဲ့ lithium ဓာတ်ခဲက Mah ဘလောက်ထွက်လဲဗျ 1000 Mahလောက်ပဲထွက်တယ်ပြောကြလို့ဗျ
Mon Htike GHM Club گفت:
ရဲထြဋ္ကို ကို گفت:
Mon Mon گفت:
ခဲ 3600 Mar ဘယ်မှာဝယ်လဲဘာ်ကလဲ
နေ ကိုကို گفت:
ဆာကစ်ပြားက ဘယ်လိုမှာရမလဲ အကို လမ်းညွန်ပေးပါ
Fighter King گفت:
ဘက်ထရီ က box အကြီးနဲ့ဆို ပို သုံးလို့ရမလားbro
Andrew Thaw گفت:
Battery စက်ဘီးက lithium အဟောင်း ကို powerbank ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
Char Lie ko ko گفت:
Phoe Chan گفت:
powerbank အတွက်တွဲသုံးတဲ့ Curcit board လေးတွေ ဝယ်လို့ရတဲ့နေရာလေး ညွှန်ပေးပါဦးခင်ဗျ
Hein Paye گفت:
changing board လေးတွေဘယ်မှာဝယ်လို့ရလဲဗျ
kaung kaung گفت:
Face Book گفت:
Wai Wai گفت:
Esther Lay گفت:
power bank ဆားကစ္ေလး ဘယ္မွာဝယ္ရလဲဗ်
ဆိုင္လိပ္စာျဖစ္ျဖစ္ ဖုန္းနံပါတ္ျဖစ္ျဖစ္ ေပးပါလားဗ်
Box ဘယ်လိုဆိုင်တွေမှာ ဝယ်လို့ရလဲခင်မျာ
Bawi Lian Sang گفت:
👍👍 အသံနဲ့ရှင်းပြတာ ကောင်းမှကောင်းပါ ဆရာ နောက် videoတွေမှာလည်း အသံနဲ့ဆိုပိုကြိုက်မှာ 😁😁
قبلیbest power bank 2021 | mah | gesiel taveira | powerbank | best power bank | power bank app
Its so cute 🥰 Magnetic Fast Charger Powerbank👍👍 tiktok ttbox7777بعدی